ကျွန်ုပ်တို့သည် ID1 တွင် ID2 စားပွဲတင်မီးအိမ်အခြေခံကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုသူများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်စေမည့် ကားကိုင်ဆောင်အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲပါသည်။ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ကိုင်ဆောင်သူသည် အံဆွဲနှင့်တူသည်။ တွန်းဆွဲ။ လွှင့်တင်လိုက်ပါ။ သင့်ဖုန်းကို ၎င်းပေါ်တွင် တင်ပါ။ စုစည်းပြီး မူလအနေအထားသို့ ဆွဲတင်ပါ။ လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး အခြေခံ သပ်ရပ်မှုရှိသည်။
ထို့အပြင် နံရံတွင် မီးခွက်ကို ကိုင်ထားရန် 3M ကော်ပါရှိသော ကိုင်ဆောင်သူကိုလည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ပါသည်။ မီးခွက်ကို ဖြုတ်ပြီး အခန်းထဲကို မီးရှူးတိုင်အဖြစ် ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အရေးပေါ်သုံးရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
1. ဆီလီကွန်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ခေတ်မီပုံစံ စားပွဲတင်မီးအိမ်။ အလူမီနီယမ်နှင့် ABS
2. ဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 270 ဒီဂရီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်တံ။ အလင်းခေါင်းကို သင်နှစ်သက်ရာ အနေအထားသို့ ကွေးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
3. ဖုန်းအားသွင်းစဉ် အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် မီးအိမ်အတွင်းရှိ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစခန်းအား ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဒီဇိုင်း။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အသုံးမပြုနိုင်သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် USB အားသွင်းပေါက်လည်း ပါရှိပါသည်။
4. လွတ်လပ်သောပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်ကြောင့် မီးသည် ဖလက်ရှ်မပါဘဲ အားသွင်းကိရိယာများနှင့် တစ်ချိန်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အလင်းရောင်အတွက် လက်မောင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီတစ်လုံး။ နောက်တစ်ခုက အားသွင်းကြိုးအတွက် အခြေခံပါ။
5. နှစ်ဖက်စလုံး၏ လက်နှစ်ဖက်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် မှိန်စက်ကို တို့ထိခြင်းဖြင့် ခြေလှမ်းမဲ့မှိန်မှိန်မီးအိမ်။
6. ပိုမိုအသုံးပြုရန်အတွက် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော လက်မောင်းဒီဇိုင်း။ ဓာတ်မီးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ အရေးပေါ်မီး ညဘက်တွင် ကက်ဘိနက်မီး သို့မဟုတ် အလုပ်အလင်းရောင်
7. ကလေးများအတွက် Eye-Caring light ဒီဇိုင်းစာဖတ်မီးအိမ်။ ညဘက်အိပ်ခန်းအတွက်ရနိုင်သည်။
ယခင်- အလွန်ပါးလွှာသော ချိန်ညှိနိုင်သော ခေတ်မီ စားပွဲတင်မီးအိမ် QI ကြိုးမဲ့ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာ USB အားသွင်းပေါက် 1000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော မျက်လုံးထိန်းသိမ်းနိုင်သော စားပွဲတင်မီးအိမ်
နောက်တစ်ခု: ပြင်းထန်သော ကပ်ခွာ 1000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော မျက်လုံးကို ထိန်းနိုင်သော Dimmable LED မီးအိမ် နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော အလွန်ပါးလွှာသော ချိန်ညှိနိုင်သော နံရံအလင်း
Ionvac Cordless Vacuum, Magnetic Base ဖြင့် Led Light, အားသွင်းစားပွဲတင်မီးအိမ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် စားပွဲတင်မီးအိမ်, ကြိုးမဲ့ကား ဖုန်စုပ်စက်, LED အလုပ်အလင်း,